यो वर्ष पूजा शर्माका फिल्म तीन, चल्ला कुन ? | Express Samachar.com
म्याग्दीमा पहिराे परेर ३२ जना बेपत्ता
भोलि शनिबार बैंक खुलै रहने
कास्कीमा पहिरोमा मृत्यु हुनेको संख्या ७ पुग्यो
यो वर्ष पूजा शर्माका फिल्म तीन, चल्ला कुन ?
२ श्रावण २०७६, बिहीबार ०८:२८ July 18, 2019 Abinash Thapa	0 Comments पूजा शर्माका, पोइ पर्यो काले
नायिका पुजा शर्मा वर्षमा एउटा फिल्म खेल्दै आएकी छिन् । तर, यो वर्ष पुजाको ३ वटा फिल्म प्रर्दशनमा आउँदैछ । ‘पोइ पर्यो काले’, ‘म यस्तो गीत गाउँछु २’ र ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’ गरी पूजा अभिनित तीन फिल्म प्रदर्शनको पर्खाइमा बसेका हुन् ।
शिशिर राणा निर्देशित फिल्म ‘पोइ पर्यो काले’ दीपावलीको अवसर पारेर कार्तिक ८ गते प्रर्दशन हुँदैछ । यो फिल्ममा पुजासँग आकाश श्रेष्ठ, सौगात मल्ल, श्रृष्टि श्रेष्ठको पनि मुख्य भुमिका रहेको छ । त्यस्तै, दुई वर्ष अगाडी रिलिज भएको फिल्म ‘म यस्तो गीत गाउछु’ सिक्वेल बन्दैछ ।
यो फिल्ममा पुजा शर्मा र पल शाहको मुख्य भुमिका रहेको थियो । ‘म यस्तो गीत गाउछु २’मा पनि पुजा र पलको जोडी दोहोरिदैछ । यो फिल्मको हालै मात्र मुर्हुत भएको छ । निर्देशक सुर्दशन थापाले फिल्म बन्ने घोषणा गरेसँगै फिल्म प्रर्दशन तय गरेका थिए । यो फिल्म फागुन २७ गते देखि प्रर्दशन हुँदैछ ।
पुजाले सुर्दशन थापाको निर्देशन दुई वटा फिल्म खेलेकी छिन् । तर, यो फिल्म भन्दा अगाडि छायांकन गरिएको फिल्म ‘सम्हालिन्छ कहिले मन’को प्रर्दशन मितिको टुगाो लागेको छैन । बुझिए अनुसार, यो फिल्म नयाँ वर्षलाई लक्षित गरेर प्रर्दशन गरिने छ । यो फिल्ममा पुजासँगै आकाश श्रेष्ठ र सोनम तोप्देनको मुख्य भुमिका रहेको छ ।
पुजाको दर्शक माझ राम्रो क्रेज रहेको छ । यो वर्ष तीन फिल्मले पुजाको फिल्म करियरलाई कुन उचाईमा पुर्याउछ त ? पुजा शर्माको गत वर्ष ‘रामकहानी’ फिल्म प्रर्दशनमा आएको थियो । यो फिल्मले बक्स अफिसमा सन्तोषजन व्यापार गर्यो ।
यो पनि हेर्नुस – हुलमुलका फिल्ममै रमाएकी प्रियंका
← ऋचाको ‘सुपर गोर्खे’ रिलिज मिति तय
लागुऔषधसहित बाराका दुई पक्राउ →
अष्ट्रेलियामा हेलिकप्टरबाट गोली हानेर मारिए पाँच हजार उँट
१ माघ २०७६, बुधबार १५:१० Abinash Thapa 0
डाक्टरहरु गरे आकस्मिक बाहेक सबै सेवा बहिष्कार
१५ फाल्गुन २०७५, बुधबार ११:४० Abinash Thapa 0
एकबाट अर्को जिल्लामा गाडी चलाउन नपाइने
९ चैत्र २०७६, आईतवार १३:३१ Abinash Thapa 0
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:३१ Abinash Thapa 0
म्याग्दीका विभिन्न ठाउँमा पहिराेमा परेर ३२ जना बेपत्ता भएका छन् । धाैलागिरि, मालिका र मंगला गाउँपालिमा खसेकाे पहिराेमा ३२ जना
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:२८ Abinash Thapa 0
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:२५ Abinash Thapa 0
२६ असार २०७७, शुक्रबार ११:१३ Abinash Thapa 0